Asc, waaku salaamay maax walaal. Waxaan rabay inaan kuwaydiyo inaad iga caawin kartid sidaan page qof iga horeeyay bilaabay laakiin uu ilaaway inuu xiro aan u xiro. Ninyahow page kaan qof ayaa markaata badala information or information false ah kuqora. sidaas darteed ayaan u xiri lahaa maadaama ay markasta dadkaa fundalizing kusameeyaan page ka aan kahadlayo. Sikastaan ubaaray oo waa waayay tutorial itusa si page loo xiro. Marka adaan ku arkay oo page xiray. Iga caawi hadaad awoodo ninyahow...
Xalkaan iigu soo qor hadii lasmayn. Karo, kadibna email kayga ayaan kusiinayaa.
Aad baad u mahadsantahay walal.
Sxb waan rabaa inaan ku weydiiyo qeybta aaad kaga hasashay Beesha absame ma aqoon daro ayaa heysay mise ula kac ayaad isagso qortay maxaa yeelay marka koobaad waxaad ka tagtay Beesha Baalcad absame marka labaad cida curudka ah ma aadan sixin iyadana sida aan filayo.
waa kiu salaamay saaxiibka la aqoon.
hadii aad fiiriso taariikhda bogga Absame Waxaa ka arki kartaa tirada dad ee wax ku qoray bogga.
wikipediaha qof walbo ayaa wax ku qoro, badalo ama saxo. wixii qalad ah waa sixi kartaa.
aniga wax kama qoro qabiil sababtoo ah ma xiiseeyi in aa barto, laakiin wixii aqoontaada waa ku soo darsan kartaa mahadsanid Maax (wadahadal) 20:18, 8 Abriil 2021 (UTC)[reply]
Qoraa cusub[wax ka badal xogta]
Masha allah. Aniga wan jeclaha inan qoro maqaalo afsoomaali ku baxa. Zeynaar1 (hadal) 19:40, 9 Abriil 2020 (UTC)[reply]
Qabyalada iyo cunsurimada iska dhaaf, Abgal cusman.mudulood (wadahadal) 05:55, 27 Agoosto 2020 (UTC)[reply]
New article[wax ka badal xogta]
Hello. Kindly check the edits made by the IPs at Beesha Baho. Thank you. Minorax (wadahadal) 08:01, 11 May 2020 (UTC)[reply]
Asalka[wax ka badal xogta]
Laakin waxay hanigu hiila tahay inaad ku riyaaqsanayn cilmi afafka Soomaaliyeed ee dhaxal kuu biirsan. Salaan sare. Gashukigaarakaah (wadahadal) 12:39, 23 May 2020 (UTC)[reply]
Facaye[wax ka badal xogta]
Salaan iyo Isbarasho.[wax ka badal xogta]
Waan kusalaamay Walaal Magacaygu WaaC/risaaq Macalin Cilmi waxa aan kamid ah dadka Soomaaliyeed ee ku taxan Shabakadda Wikipedia-ha waxaana aan jeclahay inaan intii Karaankayga ah wax kusoo kordhiyo kaydkan.Wada Shaqayn Wacan. Cabdirisaaq Macalin Cilmi (wadahadal) 20:32, 23 Luuliyo 2020 (UTC)[reply]
Codsi horumarin Bogga Degmada Feer-feer[wax ka badal xogta]
Qaswade la xanibey[wax ka badal xogta]
Asc sxb Maax, dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay waxaan ku maqnaa safar markaa maanta aan furay halkan. Isticmaale User:Wxbngmgalin iyo qof kale ayaa waxay wareejin ku sameeyay boggad aad u badan, kuwaas oo dhamaan magacyada soo gaabiyeen. Labada isticmaale waan xanibey, laakiin boggagaas in magacooda la toosiyo u baahan. Iga caawi hagaajinta MAQAALADAN. Mahadsanid. Ismail4all (wadahadal) 00:00, 6 Oktoobar 2020 (UTC)[reply]
ok, soo dhawoow Maax (wadahadal) 19:21, 8 Oktoobar 2020 (UTC).[reply]
Asc maax, walaaloow waxaan u aahabay inaad iga caawisid page family kayga kusaabsan on wax kaqoray inaan kaxiro information khalad ah oo dad kudarayaan. Fadlan isoo jawaab walaal. Mustafaa2025 (wadahadal) 23:43, 1 Juun 2021 (UTC)[reply]
Balaadhinta Maqaalada Jabuuti[wax ka badal xogta]
Salaan sare Maax, waxaan rajaynayaa inaad wacan tahay sxb. Waxaan bilaabay balaadhinta Boggaga ku saabsan Jabuuti iyo Template Jabuuti, markaa waxaan kaa codsanayaa inaad iga caawiso howshaas. Mahadsanid, Ismail4all (wadahadal) 08:09, 8 Oktoobar 2020 (UTC)[reply]
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=User_talk:Maax&oldid=212160"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 1 Juun 2021, marka ee eheed 23:43.